Falling subsidies, rising prices: Why only now? Coz if not, gov will bankrupt!
Reviu: Hujan Hitam oleh Masuji Ibuse
Image of the Week: And the road goes on forever…
Ju’s Notes : ဂျူး – ဖန်တီးခြင်း၏ အနုပညာ – ၁
Honda Accord owner pissed off with Honda over unresolved brake issues
Time to sign up the Rome Statute that created International Criminal Court (ICC)
1Malaysia: People first, performance now? Inquest from2weeks to 1 year!!
Posted: 17 Jul 2010 10:44 AM PDT
All councillors from the Petaling Jaya City Council (MBPJ) were sworn in last Thursday. I was one of them.
Michael Soon, who after having served for two full years and was dropped this year, shares with us some of the interesting murmurings that took place that afternoon after the solemn ceremony ended.
It is all revealed in the latest installment of his blog called Michael Soon -
Posted: 04 Jul 2010 09:05 AM PDT
As rumours ofasnap general election intensify, Pakatan Rakyat is taking its fight overseas with the launch of their Friends for Pakatan Rakyat (FoPR) club in London yesterday.
FoPR chairperson Brain Morais estimated that 20,000-30,000 Malaysians live in London alone.
They representapotential political support group that could channel its energies and resources through the club.
For the launch, Pakatan top guns flew in from Malaysia to massage the morale of overseas supporters and run throughalengthy checklist of BN blemishes, whilst allaying concerns about problems within the coalition, duringafive-hour wide-ranging forum.
Above all, the message was to exude confidence in Pakatan's ability to win the next general election, adding that the Sibu by-election was the precursor to BN's downfall.
PKR supreme council member Zaid Ibrahim (right) said this has led toasituation where BN would attack imaginary enemies or create dodgy excuses to taint rivals.
Among others, he cited the banning of cartoon books by Zulkiflee Anwar Ulhaque, better known as Zunar, and attempts to taint his Manchester rendevous with fugitive blogger Raja Petra Kamarudin asacriminal act.
"(BN) are inastate of panic, they now see enemies everywhere," said Zaid, who later stated confidently that Pakatan's takeover of Putrajaya is inevitable and near.
As the cheerleading baton passed on to PAS treasurer Hatta Ramli, he said BN bigwigs such as Umno vice-president Hishammuddin Hussein have dropped wide hints thatageneral election is looming.
"Which is September I guess. If it is, I think we will win big," said Hatta (left).
He then mooted the possibility of Pakatan-held states of Kelantan, Kedah, Penang and Selangor choosing not to dissolve their respective state legislative assemblies asatactical manoeuvre.
"I'm trying to persuade our leaders…. I hope, or we hope, that the states now controlled by Pakatan will not join the fray and will not dissolve out state assembly.
"We haveaduty to do. We have been given the task to rule for five years. We cannot run away from our responsibilities," he said.
Hatta said that shouldasnap election be called, this scenario will allow Pakatan to concentrate its efforts on capturing other states, particularly the "difficult" states of Johor, Sabah and Malacca.
BN's only innovation
The final speaker, Lembah Pantai MP Nurul Izzah Anwar, tookamore nuanced perspective and invited her audience to appreciate the fact that unlike the BN, Pakatan is open to criticism and willing to improve itself.
"You shouldn't choose Pakatan just because we are the antithesis to BN. We have our weaknesses, but we have also been making progress," she said.
Eager to quote policy positions, she cited successes like the implementation of Selangor Select Committee on Competency, Accountability and Transparency which acts asainternal check-and-balance mechanism.
"(Pakatan) distinguishes the power of the state, the state assembly and the powers of the executive," said Nurul Izzah, adding that with the BN, the lines are opaque.
Nurul Izzah (left) also tookajibe at Umno's apparent attempts to "outsource" its racial agenda to controversial Malay rights advocate Perkasa.
"In the 10th Malaysia plan, innovation is said to be the main driver of economic growth. The only innovation (thus far) seems to be Perkasa," she quipped.
"Ibrahim Ali… he isacreature who has to be avoided at all cost… The prime minister has allowed the voice of these narcissistic, narrow-minded, dangerous Malays and allowed (Dr) Mahathir (Mohamad) to back them up, to shore up support, supposedly for Umno, at what cost?"
Other personalities at the event were fugitive blogger Raja Petra Kamarudin, private investigator in exile P Balasubramaniam (in red shirt), and Tumpat MP Kamaruddin Jaafar.
The event was held at the Conway Hall, which is reputed asahub for free speech and previouslyaplatform for speakers such as author Salman Rushdie.
For Pakatan, the cost of flying its leaders to London will be far outweighed by the votes it can achieve, if FoPR can get even half as many Malaysian Londoners to make the trip back home.
DANNY LIM isafreelance writer and photographer currently based in the UK.
Posted: 17 Jul 2010 08:40 AM PDT
Posted: 17 Jul 2010 08:06 AM PDT
That was what Idris Jala, the man in charge of Pemandu, said on Subsidy Rationalisation Lab open day - the government risked going bankrupt because of the fuel subsidies.
But of course, Najib who himself had appointed Idris Jala, said Pemandu's figures were merely projections.
Every time there isaprice hike, the government will repeat the same old story that our fuel price is the cheapest in the region.
Well, just read the letter below written by an ordinary man on the street:
WE have been told how our government will go broke if the fuel subsidy is not done away with. The question is, are we Malaysians ready for another fuel price hike? In 2008, our fuel price topped RM2.70alitre and we decided to teach our governmenta"lesson". And subsequently the price was brought down to RM1.80alitre.
Datuk Seri Idris Jala, minister in the Prime Minister's Department, had said that our country risks going bankrupt in 2019 because of the fuel subsidies.
The fact is we are not ready for another fuel hike. We can hardly afford our own cars. If the price of fuel is compared to Thailand, let's compare the prices of cars also. A Honda City 1.5 (2010 model) costs RM51,200 in Thailand and about RM82,300 in Malaysia. We pay an extra 61%.
A Toyota Vios 1.5 (2010 model) costs about RM51,000 in Thailand and about RM71,000 in Malaysia. We pay an extra 39%.
If the government wishes to reduce the subsidy for fuel, it is appropriate that it restructures the tax for cars or brings down the prices of cars first.
Idris said Malaysia risks bankruptcy in about nine years. But are we aware that the number of bankruptcy cases is increasing every day? In Malaysia, the total number of bankruptcy cases has risen from 70,009 in 1999 to 106,000 in 2003 and today the figure stands at more than 160,000 cases.
This means an average of 25 bankruptcy cases are reported every day. Most of these cases involve credit card and car loan defaulters.
Despite our fuel prices being one of the cheapest in the region, there are Malaysians going bankrupt for not being able to pay for their cars. It will get worse if fuel prices go up. We will tend to use our credit cards to pay for fuel. And it will lead to overspending using our credit cards.
If the government has to reduce the subsidy for fuel, so be it. But it must findaway to reduce the taxes on cars and make them more affordable.
Abdul Halim Chew
HIGH-INCOME ECONOMY GAUGE
Posted: 17 Jul 2010 07:16 AM PDT
During our Family Day meeting on Thursday night, we decided that we'd just stick to booking confirmation for 70 pax. As at the time of the meeting,atotal of 98 pax had confirmed attendance (including volunteers, clients & their family members), but based on past experiences, usually only about 70% of those who confirmed their attendance would actually turn up.
Now THAT shouldn't be too much ofaproblem if we're going toavenue which doesn't require entrance fees, like last year's event at the National Stud Farm. But since this year we're going toatheme park where entrance alone would take up the bulk of the cost, and then the food which we're not supposed to bring from outside, the package price per person is notasmall amount. Imagine booking for 98 people and eventually only 70 turning up, whatawaste of money it would be.
So we're sticking to booking for 70. In the event that all 98 turns up, we'll just buy additional entrance tickets there and then. Food? Well, we can always share the food… or if not enough, we'll just buy separately. I don't think the amount will exceed the amount of paying for the full package for 98 pax.
Anyway, since we're sticking to bookings for 70 pax, we decided not to pay 50% deposit. Instead we decided to pay in full immediately. Saves me the trouble of having to go to LWOTafew times. I already wasted one trip the day earlier when the 50% deposit cheque was wrongly written.
Well, in her text message, she asked if I was free in the afternoon and if we could meet up. She actually asked me to "ambik baby kat rumah kakak". Whoa! Baby? Did she say BABY??! Don't tell me she now hasaBABY!! OH NO!! When did this happen?? It had beenawhile since she last contacted me, but nobody, not even the staff nurse at the HIV clinic ever mentioned about Ifa being pregnant!
Then, afterawhile, after I got myself thinking… it finally dawned on me… Ifa is known as "Baby" amongst her family members. I never call her by that name and I'm not sure why she used her nama manja to refer herself to me, but the BABY in her text message wasa20+ year old baby - HERSELF! Whatarelief…
I already had other plans for the afternoon, and so no, I didn't meet her.
Later yesterday, Sofie called. Hmmm… I had just visited her the day before, what could she need now? Did someone step on Saiful's glasses again?
Sofie had just receivedacall from the staff nurse at the HIV clinic. Her next appointment at the clinic is supposed to be in November, but after getting the results of her blood tests, the nurse called her up telling her that she'd need to bring forward her appointment much earlier. They've set the date for early August instead.
Sofie told me that the nurse mentioned something about her CD4 increasingawhole lot. CD4 increasing? That should be good news, why the need to bring forward her appointment? Then Sofie added that the results of her blood test just came from Penang. Huh? Penang? Putting2and2together, I think the test results were her viral load tests, not CD4. And yes, if her viral load had increasedawhole lot, then there'saproblem.
Sofie herself doesn't understand all these CD4s or viral loads or whatever other medical terms. Even earlier on when she had to take some medication for some kind of brain infection, she told me that was her "ubat sakit otak". :-)
Then, when they're wide awake, I get to bore them to sleep… :-)
A busy week it had been. So far no plans for the coming week other than the Family Day meeting to discuss on the logistics, especially on who's fetching who and where. I think (and I hope) I can relaxabit this coming week.
Posted: 17 Jul 2010 04:57 AM PDT
In my DOE days, getting media coverage for clean energy innovations was so hard, we used to joke that maybe we should startarumor that it was all based on alien technologyala the X-Files….
Posted: 17 Jul 2010 12:32 AM PDT
Posted: 16 Jul 2010 11:47 AM PDT
Posted: 15 Jul 2010 11:17 PM PDT
2 - Satu demi satu gambaran tentang mayat-mayat boleh menjadikan pembaca akhirnya lali dengan mayat. Mungkin itu perasaan rakyat Hiroshima/Nagasaki. Mayat-mayat bergelimpangan di sana sini dan melihatnya setiap hari, barangkali mereka sudah tidak ada perasaan. Hidup mesti diteruskan.
Oh, 4/5 bintang. Kalau boleh dapatkan versi Inggeris atau Jepun (kalau boleh membaca dalam Nihonggo).
Posted: 16 Jul 2010 10:00 PM PDT
Sunset on the Hulunbeir Grasslands, Inner Mongolia.
Posted: 16 Jul 2010 10:20 PM PDT
Azizi telah menghasilkan lebih 30 buah novel, tidak kurang 300 cerpen, ratusan artikel sastera dan kritik sosial,5antologi cerpen, penulis drama Radio, drama TV dan empat buku social. Kini beliau menjadi Editor Utusan Pengguna Pulau Pinang (CAP) Azizi juga dianggap oleh sesetengah penulis sebagai 'Penulis Sayembara' kerana sering menggondol hadiah.
Posted: 17 Jul 2010 07:01 AM PDT
မေမေအခုရေးနေသည့်စာကို သား အခု မဖတ်နိုင်သေးတာ မေမေသိပါသည်။ သားသည် အခုမှ အသက်သုံးနှစ်ပြည့်ခါစ လူကလေးမဟုတ်လား။ သို့သော် သားစာဖတ်နိုင်သည့်အရွယ်အထိ မေမေ မစောင့်နိုင်လောက်အောင် မေမေ့ အတွေးတွေက လောကြီးနေသည် သား။ သား ဘယ်လိုကြီးပြင်းလာမှာလဲ၊ သားသည် ဘယ်နေရာတွင် ထူးချွန်ထက်မြက်ပြီး ဘယ်နေရာတွင် ညံ့ဖျင်းမည်လဲ။ သား၏အနာဂတ်ကို အခုပဲ မြင်ချင်လွန်းလို့ မေမေ စိတ်လှုပ်ရှားစွာ ရင်ခုန်လှပါပြီ။
သားကလေးသုံးနှစ်အရွယ်မှာ သားနှင့်ပတ်သက်သည့် အနာဂတ်ကို မေမေ အဆုံးအစမရှိ ကျယ်လွင့်စွာ စိတ်ကူးကြည့်နိုင်သည်။ သားကပုံသဏ္ဌာန်မပေါ်လာသေးသည့် ရွှံ့စေးတုံးကလေး တစ်တုံးကိုး။
သားက ရထားတွေကိုချစ်သည်။ သံလမ်းပါသည့် ကစားစရာရထားလေးကို တမေ့မမော ဆော့ကစားနေတတ်သော သားသည် ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးပြေးဆွဲသည့် ရထားကြီးတွေကို စီးရသည့်အခါ လက်ခုပ်လက်ဝါးတီး၍ ခုန်ဆွခုန်ဆွ ကျေနပ် ကြည်နူးနေတတ်သည် မဟုတ်လား။ သားသည် တစ်ချိန်ချိန်မှာ ရထားကြီးတစ်စင်းကိုမောင်းနှင်မည့်သူ ဖြစ်လာမလား၊ သို့မဟုတ် ရထားတွေကိုပိုင်ဆိုင်သောသူ ဖြစ်လာမလား၊ ဒါက သား၏ စိတ်အားသန်မှုနှင့် ဖန်တီးတီထွင်စွမ်းရည်ပေါ်မှာ မူတည်လိမ့်မည်။
သားနှင့်ပတ်သက်သည့် မေမေ့မျှော်လင့်ချက်တွေက တခြားမိခင်တွေ၏ မျှော်လင့်ချက်တွေနှင့် တူချင်မှ တူပါလိမ့်မည်။ မေမေက သားကိုဆရာဝန်ဖြစ်ဖို့၊ အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ဖို့၊ စစ်ဗိုလ်ဖြစ်ဖို့၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်ဖို့၊ အနုပညာရှင်ဖြစ်ဖို့၊ ကျောင်းဆရာဖြစ်ဖို့ စသည်စသည် တိကျစွာသတ်မှတ်ပြီး မျှော်လင့်မထားပါ။ မေမေမျှော်လင့်သည်က တစ်ခုတည်း၊ သား စိတ်ဝင်စားစွာရွေးချယ်လိုက်သော ပညာရပ်တစ်ခုမှာ သားသည်ဖန်တီးတီထွင်နိုင်သည့် အရည်အချင်းဖြင့် ထူးချွန်စွာ အောင်မြင်နိုင်ဖို့၊ အဲဒါမေမေ၏ တစ်ခုတည်းသော မျှော်လင့်ချက်ဖြစ်သည် သားရယ်။
အဲသည်တစ်ခုတည်းသော မေမေ့မျှော်လင့်ချက် ပြည့်ဝဖို့ အခုကတည်းက မေမေကြိုတင်ပြင်ဆင်ရတော့မည်။ မေမေ့မှာ အရည်အချင်းတွေ လိုအပ်နေသေးသည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လူတစ်ယောက် ထူးချွန်သော ဖန်တီးရှင်ပုဂ္ဂိုလ် ဂျီးနီးယပ်စ် ဖြစ်လာဖို့ သူ့ပတ်ဝန်းကျင်က ဝိုင်းဝန်းမတင်ပေး၍ မရနိုင်သော်လည်း ထူးချွန်မည့်ကလေးတစ်ယောက်ကို အရည်အသွေးတွေ ပျက်စီးသွားအောင်တော့ သူ့ပတ်ဝန်းကျင်က ဆွဲချပစ်နိုင်သည်ဟု မေမေနားလည်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သားမှာ ဖန်တီးတီထွင်နိုင်စွမ်းရှိလျှင် ထိုအရည်အသွေးကို မေမေ ဆွဲချဖျက်ဆီးမပစ်မိဖို့ အရေးကြီးပါသည်။
ဒါကြောင့် မေမေ့မှာ ဟောသည် အရည်အချင်းတွေနှင့် ပြည့်မီအောင် မေမေ ကြိုးစားရလိမ့်မည်။
(၁) ကလေးတစ်ယောက်လို တွေးတတ်သည့်အကျင့် ရှိရမည်။
ကလေးတစ်ယောက်မှာ ဖန်တီးစိတ်နှင့် စိတ်ကူးဖြန့်ကျက်သည့် အရည်အသွေးတွေ ရှိသည်။ မေမေသိပါသည်။ ကလေးတစ်ယောက်၏ ဖန်တီးကြံဆစွမ်းရည်ကို အားပေးတတ်ဖို့ဆိုလျှင် မေမေ့မှာ ကလေးတစ်ယောက်၏ စိတ်ကူးကြံဆမှုမျိုး ရှိဖို့လိုသည်။
တစ်ခါတုန်းက ပန်းချီအကျော်အမော်တစ်ယောက် ဖြစ်လာနိုင်ဖွယ်ရှိသည့်ကလေးတစ်ယောက် လူကြီးမိဘတို့၏ မသိနားမလည်မှုကြောင့် လေယာဉ်ပိုင်းလော့ ဖြစ်သွားရဖူးသတဲ့။ အဲသည်လူကတော့ ကွယ်လွန်သူ ပြင်သစ်ဆရာကြီး အန်တွမ်း ဒီ စန်းတက်ဇူပေရီပါပဲ။ သူရေးခဲ့သော 'မင်းသားလေး' အကြောင်း မေမေ သားကို ပုံပြောပြဖူးပါသည်။ အဲသည် စာအုပ်ထဲမှာ သူ ငယ်စဉ်က ရေးဆွဲခဲ့သည့် ပန်းချီရုပ်ပုံတစ်ခုအကြောင်း ပြောထားသည် မဟုတ်လား။ သူရေးဆွဲသည်က ဆင်တစ်ကောင်လုံးကို မျိုထားသည့် မြွေကြီး၏ပုံ၊ သို့သော် မြွေ၏ ပြင်ပပုံသဏ္ဌာန်ကိုပဲ ပုံဖော်ရေးဆွဲထားသဖြင့် လူကြီးတွေကို 'ဒါကြောက်စရာကောင်းလား' မေးသည့်အခါ 'ဒါ ဦးထုပ်တစ်လုံးပဲ၊ ဦးထုပ်ကို ဘာကြောင့် ကြောက်ရမှာလဲ' လို့သာ ပြန်ဖြေကြသတဲ့။ ထိုအခါ လူကြီးတွေ အသေအချာမြင်တတ်ဖို့ မြွေ၏ အတွင်ပိုင်းကိုပါ ဖောက်ထွင်းရေးဆွဲပြရပြန်သတဲ့။ အဲသည်အခါကျမှ ဆင်ကို မျိုထားသော မြွေကို လူကြီးတွေ မြင်တတ်သွားပါသတဲ့။ သို့သော် လူကြီးတွေက သူ့ကို အဲလိုပုံမျိုးမဆွဲဖို့၊ ပထဝီ၊ သမိုင်း၊ သင်္ချာဘာသာကိုပဲ ပို၍ စူးစိုက်လေ့လာဖို့ တိုက်တွန်းဖျောင်းဖျကြပါသတဲ့။ အဲသည်လိုနှင့် Antoine de Saint Exupery ဟူသော လူတစ်ယောက်သည် ပန်းချီအကျော်အမော် ဖြစ်မလာဘဲ လေယာဉ်ပိုင်းလော့ ဖြစ်လာခဲ့လေသတဲ့။ သူက ဟာသစွက်ပြီး ရေးထားပါသည်။
သားက မေမေ့အား ဆင်ကိုမျိုထားသည့် မြွေတစ်ကောင်ပုံကို ပြင်ပသဏ္ဌာန်ဖြင့်ရေးဆွဲပြီးလာပြခဲ့လျှင် အဲဒါကို ဦးထုပ်အဖြစ် မေမေမြင်သွားမိမှာကို စိုးရိမ်သည်။ ဆင်ကိုမျိုထားသည့် မြွေကြီးပဲဟု မြင်တတ်ပြီး ထိုပုံကြောင့် မေမေ ကြောက်သွားချင်ပါသည်။ အဲသည်လို ဖောက်ထွင်းသိမြင်ဖို့ဆိုလျှင် မေမေသည် သားတွေးသလို တွေးတတ်မှ ဖြစ်မည်။
မေမေတို့လူကြီးတွေသည် အသက်ကြီးလာသည့်အခါ ပညာတွေတတ်လာသည်။ အတွေ့အကြုံဗဟုသုတတွေ များလာသည်။ တားမြစ်ချုပ်တည်းမှုတွေ များလာသည်။ အဲသည်အခါမှာ မေမေတို့၏ စပ်စုစိတ် စူးစမ်းကြံဆစိတ်တွေ ဆုံးရှုံးသွားတော့သည်။ အလုံးစုံကိုသိသူတွေ ဖြစ်လာပါရဲ့။ သို့သော် ကျရှုံးမှာကြောက်သဖြင့် စိတ်ကူးအသစ်တွေနှင့် ဝေးရလေသည်။ သား အရွယ်ရောက်သည့်အခါ မေမေတို့လို သားမှာ အဲသည် အရည်အချင်းတွေ မဆုံးရှုံးစေချင်ပါ။ အဲသည် စပ်စုစိတ်၊ စူးစမ်းကြံဆစိတ်တွေသည် ထူးချွန်သောဖန်တီးစိတ်ကူးရှင်ဖြစ်ဖို့ အရေးကြီးသော လိုအပ်မှုတွေ ဖြစ်သည်သား။
ကလေးတစ်ယောက်လိုတွေးလျှင် လွတ်လပ်သည်။ အလိုအလျှောက် သဘာဝတုန့်ပြန်မှု ရှိသည်။ အကြောက်အလန့် ကင်းမဲ့သည်။ ဝေဖန်ခံရမှာကို မကြောက်၊ အဲသည်အခါမှာ စိတ်ကူးသစ်တွေကို ဖန်တီးနိုင်လိမ့်မည်။ ဒါမှလည်း စိတ်ကူးသစ်တွေ ဖန်တီးသော သားကို မေမေက အားပေးနိုင်ပါလိမ့်မည်။
(၂) မေးခွန်းတွေကို သားမေးတဲ့အခါ မေမေ စိတ်ရှည်ရှည်ဆွေးနွေးနိုင်ကျင့်ရှိရမည်။
ကလေးတစ်ယောက်ကို မေးခွန်းတွေ မေးတတ်အောင်သင်ပေးစရာ မလိုပါ။ ကလေးတွေက မေးခွန်းမေးသည့် အလေ့အထ ရှိပြီးသားပါ။ ထိုအလေ့အထကို ပျောက်သွားအောင် တားမြစ်ပိတ်ပင်လိုက်သူက လူကြီးတွေသာ ဖြစ်သည်။
ကောင်းကင်ကြီးက ဘာကြောင့် ပြာနေတာလဲ။
ကလေးတစ်ယောက်၏အဲသည်မေးခွန်းမျိုးကို အတိအကျ မဖြေနိုင်သော၊ စိတ်ရှုပ်ထွေးနေသော လူကြီးသည် ကလေးကို ဟန့်တာပိတ်ပင်လိုက်မှာ အမှန်ပဲ။ ထိုအခါ ကလေးအနေနှင့် မေးခွန်းမေးခြင်းမှာ မသင့်တော်သောကိစ္စတစ်ခုအဖြစ် လက်ခံပြီး တွန့်ဆုတ်သွားမှာပဲ။
'ဘာကြောင့်လဲ' ဆိုသောမေးခွန်းသည် ကလေးတွေဆီမှာ အမြဲရှိသည်။ ကလေးတွေက အရာရာကို ညီတူညီမျှ အလေးအနက်ထာေးသာကြောင့် ဖြစ်သည်။
ဒီအပင်က ဆူးတွေ ရှိပြီးတော့ ဟိုအပင်က ဘာဖြစ်လို့ ဆူးမရှိတာလဲ။ သား မေးလာလိမ့်မည်။ အဲသည်အခါ မေမေ မဖြေတတ်ပေမဲ့ တတ်စွမ်းသမျှ ရုက္ခဗေဒလောကသဘာဝဖြင့် ဖန်တီးအားထုတ်ကာ မေမေ ဖြေရတော့မည်။
နေပူကျဲကျဲမှာ အိမ်အပြင်ကို မထွက်ရဘူး……ဟု မေမေ တားမြစ်သည့်အခါ သားက "ဘာကြောင့်လဲ၊ ဘာဖြစ်လို့ မထွက်ရမှာလဲ၊ ထွက်ရင် ဘာဖြစ်မလဲ" ဟု ပြန်မေးလာခဲ့လျှင် မေမေ စိတ်မတိုမိမှ ဖြစ်မည်။ "ဘာကြောင့်" ဟူသော မေးခွန်းကိုသားမေးတိုင်း အဲသည်မေးခွန်းအတွက် မေမေ့မှာ အဖြေ အဆင်သင့်ရှိရမည်။ သားမေးတိုင်း မေမေဖြေနိုင်မှ သားက ဆက်မေးဖို့သတ္တိရှိလိမ့်မည်။ သား မေးခွန်းတွေမေးတတ်မှ ပြဿနာတစ်ခုကို ဘက်ပေါင်းစုံမှ သား ဆင်ခြင်ဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မည်။
တစ်ခါတုန်းက မေမေစာအုပ်တွေ စီထပ်နေသည့်အခါ သား၏ မမက မေမေ့အနားမှာကူညီပြီး စာအုပ်တွေ သယ်ပေးနေခဲ့သည်။ အဲသည်တုန်းက သားသည် မေမေ့ဘဝထဲသို့ ရောက်မလာသေး။ မေမေ့ဆီမှာ၊ မေမေ့အိမ်မှာ၊ မေမေ့သားအဖြစ်ဝင်လာဖို့ ခပ်လှမ်းလှမ်းမှ အကဲခတ်နေဆဲကာလ ဖြစ်လိမ့်မည်။ သား မမက အသက် ၄- ၅ နှစ်အရွယ်ပေါ့။ သား မမက စာအုပ်တွေကို အမြင့်ကြီးထပ်စေချင်သည်။ မေမေက နှစ်ပုံ သုံးပုံခွဲလျက် ခပ်နိမ့်နိမ့်သာ ထပ်သည်။ သား မမက မေမေ့ကို မေးခဲ့သည်။
"ဘာလို့မထပ်သလဲဆိုတော့ ပြိုကျမှာမို့ပေါ့"လို့ မေမေ ဖြေခဲ့သည်။ သူများအပြောကို လွယ်လွယ်နှင့်လက်မခံချင်သော သား မမက မျက်မှောင်ကြုတ်သည် သား။ သည်တော့ မေမေက သမီးစိတ်ကြိုက်အမြင့်ကြီး ထပ်ပေးလိုက်သည်။ အဲသည်အခါ စာအုပ်ပုံက ပြိုကျသွားလေသည်။ ထိုအခါမှ သမီးက လက်ခံသွားတော့သည်။
ဘာကြောင့် ဟူသောအမေးကို လက်တွေ့ရှင်းပြနိုင်သည့်အခါတွေ ရှိသည်။ လက်တွေ့ရှင်းပြလို့မဖြစ်ဘဲ စကားနှင့်သာ ရှင်းပြနိုင်သောကိစ္စတွေလည်း ရှိပါသည်။ လက်တွေ့ရှင်းပြလို့ရသည့်ကိစ္စတွေမှာ လက်တွေ့ရှင်းပြထားမှ လက်တွေ့မပြနိုင်သည့်ကိစ္စတို့တွင် မေမေတို့၏အဖြေကို သားတို့ ကျေနပ်လိမ့်မည်။ အဲသည်လို ကျေနပ်မှလည်း နောက်ထပ်ဆက်၍ မေးခွန်းတွေမေးဖို့ စိတ်အားထက်သန်လိမ့်မည်။
သည်တော့ မေမေ သားတို့မေးသမျှ မေးခွန်းတွေကို စိတ်ရှည်ရှည်ဖြေရင်း အားပေးချင်ပါသည်။
(၃) အဆပွားယူတဲ့ အတွေးအခေါ် (Reproductive Thinking) ထက် ထုတ်လုပ်ဖန်တီးနိုင်တဲ့ အတွေးအခေါ် (Productive Thinking) ကို ပိုပြီး လိုအပ်ကြောင်း သားကို အသိပေးပြောပြရမည်။
မေမေတို့ သာမန်လူတွေသည် အဆပွားယူသော အတွေးကိုသာ တွေးတတ်လေ့ရှိကြသည်။ သဘောကတော့ အတိတ်ကကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့ ဆင်တူရိုးမှားပြဿနာတွေအပေါ်မှာ အခြေခံပြီး တွေးတောခြင်းဖြစ်သည်။ အရင်တုန်းက ကြုံခဲ့သည့် ပြဿနာကို မေမေတို့သင်ထားသည့်ပညာ၊ တွေ့မြင်ထားသည့်ဗဟုသုတတွေသုံးပြီး ဖြေရှင်းခဲ့ပုံများကို ပြန်လည်မှီငြမ်းပြီး အဲသည် ထုံးတမ်းစဉ်လာအတိုင်း နောက်ထပ်အဆပွား တွေးခေါ်ဖြေရှင်းနည်း ဖြစ်သည်။ အဲသည် တွေးခေါ်ဖြေရှင်းနည်းကို မမှန်ဘူးဟု မေမေမဆိုလိုပါ။ သို့သော် အသစ်အသစ်သော နည်းလမ်းစိတ်ကူးတွေ ကိုမရနိုင်။ ရပြီးသားကိုပဲ ရလိမ့်မည်။ အဲသည်နည်းနှင့် မေမေတို့ အားလုံး သာမန်လူတွေ ဖြစ်ခဲ့ကြရသည်။
ထူးချွန်ထက်မြက်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ မေမေတို့နှင့် မတူ။ သူတို့က ထုတ်လုပ်သည့်အတွေးကိုသာ တွေးကြသည်။ ပြဿနာတစ်ခုကို ရင်ဆိုင်ရသည့်အခါ သူတို့စဉ်းစားပုံက
"ဒီပြဿနာကို နည်းလမ်းဘယ်နှစ်မျိုးနဲ့ ငါ ချဉ်းကပ် စဉ်းစားနိုင်မလဲ"
"ငါမြင်ထားတဲ့နည်းကို နောက်ထပ်ဘယ်လိုပြန်တွေး ကြည့်နိုင်ဦးမလဲ"
"ဒီပြဿနာကို ငါ မတူညီတဲ့နည်းတွေ ဘယ်နှစ်မျိုးလောက်နဲ့ ဖြေရှင်းကြည့်နိုင်မလဲ" အဲသည်လို စဉ်းစားတွေးခေါ်ပါသည်။
မေမေတို့ကတော့ "အရင်တုန်းက ဘယ်သူကတော့ ဒီ ပြဿနာမျိုးကို ဘယ်လိုကိုင်တွယ်ခဲ့ဖူးတယ်" ဆိုသည့် အတိတ်အတွေ့အကြုံ သင်ခန်းစာမှပွားယူသည့် အတွေးကိုသာ တွေးတတ်သည်။
သားကို မေမေက Productive Thinking သာ တွေးစေချင်သည်။ အဲသည်နည်းဖြင့်သာ သားသည် ပြဿနာကို နည်းလမ်းပေါင်းစုံမှ တွေးဖို့ စိတ်ရှည်လိမ့်မည်။ နီးစပ်သည့်အဖြေတစ်ခု ရသွားသည့်အခါ အခြားအဖြေတစ်ခုအတွက် ဒုက္ခမခံလိုတော့သည့် စိတ်ကျေနပ်မှုမျိုးလည်း သားမှာ လွယ်လွယ် မဖြစ်ပေါ်စေလိုပါ။
အိုင်းစတိုင်းဟူသော သိပ္ပံပညာရှင် ထူးချွန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအကြောင်း မေမေသားကို ပြောပြရဦးမည်။ တစ်ခါတုန်းက အိုင်းစတိုင်းကို လူတစ်ယောက်က မေးခဲ့ဖူးသတဲ့သား။
"သာမန်လူတစ်ယောက်နဲ့ ဆရာကြီးနဲ့ ဘာတွေ ကွာခြားလို့လဲ"
အဲသည်တော့ အိုင်းစတိုင်းက ဟောသည်လို ပြန်ဖြေခဲ့သတဲ့။
"သာမန်လူတစ်ယောက်ကို ကောက်ရိုးပုံထဲမှာ အပ် တစ်ချောင်းရှာခိုင်းကြည့်ခဲ့ရင် သူ ရှာဖွေပါလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမဲ့ အပ် တစ်ချောင်း တွေ့ပြီးဆိုတာနဲ့ သူ အရှာရပ်ပစ်လိုက်လိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ အပ်တစ်ချောင်းတွေ့ပြီးပေမဲ့ ကောက်ရိုးပုံတစ်ခုလုံး မွှေနှောက်ဆုတ်ဖြဲပြီးတော့ နောက်ထပ်တွေ့နိုင်သမျှ အပ်အားလုံးကို ဆက်ရှာနေမှာပဲ၊ အဲဒီလို ကွာခြားပါတယ်"
ရစ်ချတ်ဖိုင်းမင်း (Richard Feynman) ဆိုတဲ့ အမေရိကန် ရူပဗေဒပညာရှင်တစ်ယောက်က စာသင်ကျောင်းတွေမှာ ဆပွားတွေးခေါ်ခြင်းအကျင့်ကို မသင်ပေးဘဲ ထုတ်လုပ်တွေးခေါ်ခြင်းအကျင့်ကို သင်ပေးဖို့ အဆိုပြုခဲ့သည်။
ဥပမာ ၂၉ ဂဏန်းကို ၃ ဂဏန်းနှင့်ပေါင်းရမဲ့ ပုစ္ဆာတစ်ပုဒ်ဆိုပါစို့။ ၂၉+၃ ရဲ့ အဖြေကို တွက်တတ်ဖို့က သူတို့ဆီက တတိယတန်းဆင့်ထက် ငယ်ရွယ်သူ ကျောင်းသားတွေနှင့် မသင့်တော်ဘူးဆိုပေမဲ့ ပထမတန်းဆင့် ကလေးတစ်ယောက်ဟာ ဤပုစ္ဆာကို တွေးတောခြင်းအားဖြင့် ဖြေရှင်းနိုင်မှာပါပဲ တဲ့။ ၃၀၊ ၃၁၊ ၃၂ ရယ်လို့ စဉ်းစားအဖြေရနိုင်ပါသတဲ့။ နည်း အမျိုးမျိုးနဲ့ ရှာကြည့် အမှားတွေကိုဖယ်ရင်း အမှန်တွေကို ရနိုင်မှာပေါ့ သား။
(၄) အတိတ်အတွေ့အကြုံမှ လွတ်ကင်းစွာ တွေးတောနိုင်ဖို့ သားကို မေမေ လေ့ကျင့်ပေးရမည်။
ထုတ်လုပ်သည့် Productive Thinking ကို မသုံးဘဲ နမူနာရှိပြီးသားထဲကနေ ဆပွားတွေးယူသော Re-productive Thinking ကိုချည်း မေမေတို့က အသုံးပြုနေသည့်အတွက် မေမေတို့၏ အတွေးနယ်ပယ်များ တင်းကျပ်ကျဉ်းမြောင်းကုန်ပါသည်။ အတိတ်ကကြုံခဲ့ဖူးသည့် ပြဿနာနှင့် အပေါ်ယံမှာဆင်တူပြီး အတွင်းအနှစ်မှာ လုံးဝကွဲပြားသော ပြဿနာသစ်ကိုကြုံရသည့်အခါ မေမေတို့၏ ဖြေရှင်းနည်းတွေ မှားကုန်တော့သည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ မေမေတို့တွေးသည့် Re-productive Thinking သည် မူလအစစ်အမှန်ကို တူးဆွ တွေးခေါ်ခြင်း မဟုတ်ဘဲ ရှိပြီးသားကို ပုံတူပွားသည့်အတွေး ဖြစ်နေသောကြောင့်ပါပဲ။
နမူနာအားဖြင့် မေမေကြားဖူးသော ဆွစ်(စ်)နာရီကုမ္ပဏီ အဖြစ်အပျက်ကို ပြောပြချင်သည်။
၁၉၆၈ ခုနှစ်တွင် နာရီထုတ်လုပ်စက်ရုံလုပ်ငန်းကို ပြီးခဲ့သည့်ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာကအတိုင်း ဆွစ်(စ်)က လွှမ်းမိုး ချုပ်ကိုင်ထားသည်။ အဲသည်အချိန်မှာ အီလက်ထရွန်းနစ်ဖြင့် နာရီရွေ့လျားဖို့ ဆွစ်(စ်)ကပဲ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှာ တီထွင်ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ သို့သော် တီထွင်မှုအသစ်ကို ထိုနှစ်တွင် ကမ္ဘာ့နာရီကွန်ဂရက်(စ်)မှာ တင်ပြလိုက်သည့်အခါ ဆွစ်(စ်)ထုတ်လုပ်သူတိုင်းက ပယ်ချခဲ့ကြသတဲ့။ စက်ရုံမှာ သူတို့ကြုံတွေ့ရပြီးသောအတိတ်ဖြစ်ရပ်တွေအရ အနာဂတ်မှာ အောင်မြင်မှာ မဟုတ်ဘူး….ဆိုသောဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်ပေါ့။ သို့သော်ဂျပန် ဆီကိုကုမ္ပဏီကတော့ အဲဒီတီထွင်မှုကို တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးသည့်နောက် ဆက်လက်ကြိုးစားသွားလိုက်သည့်အခါ ကမ္ဘာ့နာရီဈေးကွက်တစ်ခုလုံး၏ အနာဂတ်ကို ပြောင်းလဲပေးလိုက်သူအဖြစ် အောင်မြင်သွားလေသတဲ့။
အရင်က သားတွေးခဲ့ဖူးသည့် နည်းတွေအတိုင်း သား အမြဲတွေးနေမည်ဆိုပါက ကိုယ်ရပြီးသားအရာတွေကိုပဲ အမြဲတမ်း ရနေလိမ့်မည်သား။ ဖန်တီးတီထွင်ဥာဏ် ဆိုသည်မှာ အသိပညာဥာဏ်ရည်နှင့် မတူပါ။ သားမရဖူးသေးသည့်အရာကို ပိုင်ဆိုင်ရရှိဖို့ဆိုလျှင် သားမတွေးဖူးသော အတွေးသစ်တွေကို တွေးတောကြံဆနေဖို့ လိုလိမ့်မည်။
(၅) အစဉ်အလာစည်းမျဉ်းတွေကို ချိုးဖောက်ရဲဖို့ သားကို တွန်းအားပေးရလိမ့်မည်။
အသစ်တစ်ခုဖန်တီးခြင်းဆိုသည်မှာ အများနှင့်မတူခြင်း၊ အများအတွေးနှင့် ဆန့်ကျင် ဖောက်ထွက်ဖို့ဆိုလျှင် သားမှာ အများနှင့်ကွဲလွဲရဲသည့်သတ္တိ ရှိနေရလိမ့်မည်။
ဥပမာ သားက ကျောင်းသားကလေးတစ်ယောက် ဖြစ်သည် ဆိုပါတော့။ အများတကာ ကျောင်းသားတွေက မျဉ်း၏အပြင်မှာ အရောင်ခြယ်နေကြချိန်တွင် သားသည် စူးစမ်းစိတ်ဖြင့် မျဉ်း၏အပြင်မှာ အရောင်ခြည်လျှင် ပုံက ဘာပုံရသွားမလဲ ဟူသော အတွေးဖြင့် အပြင်မှာ အရောင်ခြည်ကြည့်ရဲရလိမ့်မည်။ အဲသည်လို အရောင်ခြည်မိသည့်အတွက် ဆရာက၊ သူငယ်ချင်းတွေက ဝေဖန်လျှင် သား ရဲ့ဝံ့စွာ ခံနိုင်ရမည်။
မေမေတို့လူလောကကြီးသည် ဝေဖန်ရှုတ်ချသူများ၊ ကန့်ကွက်သူများဖြင့် ပြည့်နေခဲ့သည် သား။ အများနှင့်မတူသော အသစ်တစ်ခုခုကို သားလုပ်လျှင် သူတို့တွေက သားကို လှောင်ပြောင်ကြမည်၊ သို့မဟုတ် ကရုဏာဒေါသဖြင့် ပြစ်တင်ကြလိမ့်မည်။ အဲဒါကို ခံနိုင်ရည်မရှိလျှင် သား ဘယ်တော့မှ အသစ်တီထွင်ဖန်တီးသူ ဖြစ်မလာနိုင်ပါ။ ဖန်တီးသူဖြစ်ဖို့ သတ္တိလိုပါသည်။
"ကြော်ငြာတွေမှာ အရုပ်တွေ၊ ပုံရိပ်တွေထက် စကားလုံးတွေက ပိုပြီး အရေးကြီးတယ်"ဆိုသော အများလက်ခံသည့် စည်းမျဉ်း အစဉ်အလာတစ်ခုကို Leo Burnett ဆိုသူက ချိုးဖောက် လိုက်သတဲ့။ သူသည် ယနေ့ခေတ်မှာ မှတ်မိလွယ်ဆုံး အားကောင်းလှသော ပုံရိပ်တို့ကို ဖန်တီးတင်ဆက်ခဲ့သူ ဖြစ်သတဲ့။ ဥပမာ မာလ်ဘိုရိုလူသားနဲ့ကျားကလေးတိုနီ စသည့်ပုံရိပ်များ ဖြစ်သည်…..တဲ့။ မေမေ လုံးဝလက်ခံနိုင်ပါသည်။ မေမေအခုတလော တွေ့နေရသော MTV channel မှာ လာတတ်သည့် လီဗိုင်း(စ်) ဂျင်းဘောင်းဘီကြော်ငြာကိုလည်း မေမေကြိုက်သည်။ အခန်းထဲမှာ ရပ်နေရာက နံရံတွေကို တွန်းထိုးဖောက်ထွင်းထွက်၊ ဟိုးအပြင်လောကမှာ သစ်ပင်မြင့်ကြီးတွေ၏ ပင်စည်အတိုင်း ခွန်အားအပြည့် တက်သွားပြီး လေထုထဲသို့ လွင့်ပျံခုန်သွားသော လူငယ်တို့၏ လွတ်လပ်မှု၊ ပေါ့ပါးမှု အရသာ။ အဲဒါ ဂျင်းဘောင်းဘီရဲ့ အရသာပေါ့။ အခုဖြင့် ကြော်ငြာတွေအားလုံး စကားကနည်းနည်း၊ အရုပ်ကများများ ခေတ်သို့ ရောက်ပါပြီ။
Fred Smith ဆိုသူက အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ နိုင်ငံပိုင် စာတိုက်စနစ်တစ်ခုတည်းကသာလျှင် စာဝေခွင့်ရှိသည်ဆိုသော အစဉ်အလာတစ်ခုကို ချိုးဖောက်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ သူသည် အခု မေမေတို့ တိုင်းပြည်အထိ ခေတ်စားနေသော Federal Express(Fed Ex) လုပ်ငန်းကို တည်ထောင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။
စည်းမျဉ်းအစဉ်အလာဆိုသည်မှာ တစ်ခါတစ်ခါကျတော့ လူ၏ ဖန်တီးတွေးခေါ်နိုင်စွမ်းကို အကျဉ်းချထားသော မမြင်ရသည့် အတားအဆီးတွေ ဖြစ်တတ်သည်။ အဲသည် အတားအဆီးတွေကို စိတ်ခေါ်လိုက်သည့်အခါကျမှ ကိုယ့်မှာရှိသော ဖြစ်နိုင်စွမ်းတွေ ဖြန့်ကျက်လာပြီး စိတ်ကူးသစ်တွေ ပေါ်ထွက်လာနိုင်မှာ ဖြစ်သည်။
စည်းမျဉ်းအစဉ်အလာတွေကို ချိုးဖောက်ကြည့်ဖို့ နည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ "ဘာကြောင့်လဲ" ဆိုသည့် မေးခွန်းကို ထပ်ခါထပ်ခါ မေးမြန်းဖို့ပါပဲ။ ဘာကြောင့်ဒီအတိုင်းဖြစ်ရမှာလဲ၊ ဘာကြောင့် သည်အစဉ်အလာကို လိုက်နာရမှာလဲ။ ထိုအခါ အဖြေတစ်ခုကို ရလာလိမ့်မည်။ ရလာသောအဖြေပေါ်မှာ ထပ်ပြီး မေးခွန်းထုတ်ကြည့်ရဦးမည်။ ဘာကြောင့်လဲ။ အဲသည်နည်းအားဖြင့် သားသည် အစဉ်အလာစည်းမျဉ်းတွေကို ရင်ဆိုင်သည့်အခါ ရှင်းလင်းချက်တစ်ခုရသော်လည်း ကျေနပ်မနေဘဲ နောက်ထပ် နည်းသစ်များဖြင့် ချဉ်းကပ်မိပေလိမ့်မည်။
သား သိထားတုန်းက အစဉ်အလာစည်းမျဉ်းကို ချိုးဖောက်ဖို့ ဆိုတာ လွယ်သည့်ကိစ္စမဟုတ်။ သတ္တိရှိဖို့လိုသည် ဆိုတာပါပဲ။
SOURCE_Ju's Notes : ဂျူး – ဖန်တီးခြင်း၏ အနုပညာ – ၁ (From the Face Book of Ju)
Posted: 17 Jul 2010 05:44 AM PDT
Arabic Salām and Hebrew Shalom are cognate Semitic terms for "peace", deriving fromaProto-Semitic *šalām-.
The word salām is used inavariety of expressions and contexts in Arabic and Islamic speech and writing. Al-Salam is one of the 99 names of God in the Qur'an, and alsoamale given name.
"Shalom" (in blue) and "Salām" (in green) mean "peace" in Hebrew and Arabic respectively and often representapeace symbol and is also the cover of an Israeli rap group single called "Shalom, Salam, Peace".
Shin-Lamedh-Mem (Arabic: س ل م‎ S-L-M; Hebrew: שלם‎ Š-L-M is the triconsonantal root of many Semitic words, and many of those words are used as names. The root itself translates as "whole, safe, and intact".
Neo-Aramaic ܫܠܡܐ ܥܠܘܟ šlama 'loukh, classically ܫܠܡܐ ܥܠܝܟ, šlāmâ 'laik.
Christianity: in the rosary: as-salam alayki ya Mariam "Hail Mary".
In the 2nd millennium BC, besides the Akkadian language usage of s-l-m, and Babylonian usage, there wasaspecific form of "shulmani" in the Amarna letters. A small number of the 382-letter corpus of the letters discussed the exchange of exchanged "peace gifts", namely greeting-gifts (Shulmani) between the Pharaoh and the other ruler involving the letter. Šalām, (shalamu) is also used in letter introductions, stating the authors health: an example letter EA19, from Tushratta to Pharaoh.
SOURCE: S-L-M From Wikipedia, the free encyclopedia
Posted: 17 Jul 2010 03:15 AM PDT
Posted: 17 Jul 2010 02:59 AM PDT
The perfect handshake, for both men and women, are:
use the right hand;
a complete grip
andafirm squeeze (but not too strong);
a cool and dry palm;
approximately three shakes,
withamedium level of vigour,
held for no longer than two to three seconds.
The handshake must also be executed with eye contact kept throughout
andagood natural smile
with an appropriate verbal statement,
The biggest problems were_
and lack of eye contact.
Most important factors include_
and hand temperature.
British scientists, Researchers at the University of Manchester, in northwest England, have unveiledastep-by-step guide to the perfect handshake. Geoffrey Beattie, the university's head of psychological sciences, came up withamathematical formula which took into account 12 key measures needed to convey trust and respect to the recipient.
SOURCE: Guide to the perfect handshake
Posted: 17 Jul 2010 02:39 AM PDT
MAKING A POINT: The Honda Accord laced with stickers saying
Posted: 17 Jul 2010 02:07 AM PDT
Kara singing & dancing in the rain from YeinJee's Asian Blog
Posted: 17 Jul 2010 12:29 AM PDT
Today, July 17 2010, is International Justice Day. This is the day in 1998 when the international community came together to sign the final Act that gave rise to the Rome Statute. The Rome Statute, when it came into effect in 2002, created the International Criminal Court (ICC).
Countries like Denmark, Japan, Norway, Spain, Sweden and the UK have all signed the Rome Statute. Each hasasystem of constitutional monarchy not unlike Malaysia, and yet do not have any problems beingamember of the ICC. After all, in the issue of hostilities arising out of military action, it isaquestion of operational chain of command, not who is ceremonially the head of the armed forces.
One of the ways to combat crimes against humanity, genocide, war crimes and crimes of aggression and to seek justice for their victims is to make it difficult for the perpetrators to hide from justice.
Signing the Rome Statute will sendaclear signal to the international community that Malaysia shares their commitment to put an end to the culture of impunity assumed by countries that sponsor or support such activities.
When the government sought earlier this year to becomeamember of the UN Human Rights Council from 2010 to 2013, it stated that "Malaysia has also contributed actively to the realization of human rights in all its manifestations worldwide".
What better way to actively contribute to the on-going realisation of human rights by becomingamember of the ICC? The government now has an opportunity to prove its sincerity in upholding its commitment to the international community and to the cause of international criminal justice.
SOURCE: Rome Statute: Time to sign up and be counted by Andrew Khoo in Malaysiakini.
Posted: 16 Jul 2010 11:06 PM PDT
A solemn, sad atmosphere descended on Plaza Masalam in Shah Alam this morning as family members of Teoh Beng Hock, Selangor state exco members, politicians and the public gathered to commemorate the first anniversary of the political aide's mysterious death.
Teoh's younger sister Lee Lan said, "Najib said the inquest will take two weeks, the most two months, but it has been one year now." According to her, Najib ignored the family members' request foraletter of guarantee but he assured them that they could meet him again if they were not satisfied with the result of the inquest.
Lee Lan also explained that the family members had agreed to the inquest, instead ofaroyal commission, "because Najib had said that according to the constitution, we must have inquest first".